Knowledge Archives - Myanmar Man United.
ရေအောက် စွန့်စား ရေငုပ်စစ်သည်တော်များ မွေးဖွားရာမြေ CENTRAL NAVAL DIVING AND SALVAGE DEPOT (CNDD)
scholes | 25/11/2020
တပ်မတော်(ရေ)ဟာ နိုင်ငံတကာရေတပ်များနည်းတူ ရေအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရေငုပ်နှင့်ဆယ်ယူရေးတပ်ဖွဲ့ (Diving & Salvage Depot) အား ၁၉၆၃ ခုနစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက် ရေငုပ်ပညာသည်အင်အားဖြည့်တင်းရန်နဲ့ ပညာရပ်များပြန့်ပွားလေ့ကျင့်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းလျားကန်၊ ကြက်ကျွန်းတွင် ယာယီအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစ၍ ရန်ကုန်မြို့၊
အဇာဘိုင်ဂျန် – အာမေးနီးယား စစ်မြေပြင်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မောင်းသူမဲ့ လေယယာဉ်တွေဟာ အနာဂါတ်စစ်ပွဲတွေအတွက် လမ်းညွန်ပြသမူ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလား… ( အနာဂါတ်ကာလမှာ မောင်းသူမဲ လေယာဉ်မရှိတဲ့ စစ်တပ်ဟာ စစ်ပွဲ နိုင်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက် ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်….)
အဇာဘိုင်ဂျန် – အာမေးနီးယား စစ်မြေပြင်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ မောင်းသူမဲ့ လေယယာဉ်တွေဟာ အနာဂါတ်စစ်ပွဲတွေအတွက် လမ်းညွန်ပြသမူ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလား… ( အနာဂါတ်ကာလမှာ မောင်းသူမဲ လေယာဉ်မရှိတဲ့ စစ်တပ်ဟာ စစ်ပွဲ နိုင်ဖို့ ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက် ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်….) အာမေးနီးယားနှင့် နာဂိုနို-ကရာဘတ်ခ် စစ်သားများအား ပစ်မှတ်ထားပြီး တင့်ကားများ၊ အမြောက်တပ်များနှင့် လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်များအား ဖျက်စီးသည့် မောင်းသူမဲ့
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် ကိုယ်ပျောက် စစ်သင်္ဘော များ ကိုယ်ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲ
scholes | 24/11/2020
ဆင်ဖြူရှင် (F-14) တို့ကို ရေချလိုက်သောအခါ အာဆီယံ နိုင်ငံများ အလွန်အံ့သြသွားကြသည် အာဆီယံနိုင်ငံများထဲတွင် stealth frigate ကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်မှာ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံတည်းသာ ရှိသေးသည်။ ထိုသို့အသီးအပွင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာ ဟိုးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တရုတ်နှင့် ရုရှားသို့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် အသေးစိတ်မှာမူ နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်သဖြင့် ထုတ်ဖော်မပြောလိုသော်လည်း stealth
ရေဒါဖျက်​ဒုံး (anti radiation missile) များနှင့်​ အနာဂတ်​ မဟာဗျူဟာ​မြောက်​ ထိုးစစ်​များ အကြောင်းတစေ့တစောင်း…..
scholes | 23/11/2020
ရေဒါဖျက်​ဒုံး (anti radiation missile) များနှင့်​ အနာဂတ်​ မဟာဗျူဟာ​မြောက်​ ထိုးစစ်​များ အကြောင်းတစေ့တစောင်း….. *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ဖျောပွထားပါသညျ။ ကမ္ဘာ့နိုင်​ငံ အသီးသီးမှာ ​လေကာစနစ်​များ အား​ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ၎င်း​ လေကာစနစ်​များကို ထိုး​ဖောက်​​ချေမှုန်း နိုင်​ဖို့ အတွက်​ ပြိုင်​ဘက်​နိုင်​ငံအချင်းချင်း အစွမ်းကုန်​ကြိုးပမ်း အားထုတ်ေ​​နကြဆဲ ပင်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ အချို့က တာ​ဝေးဒုံးများဖြင့်​ ရန်​သူ့​လေကာယူနစ်​များ
အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ “သံလွင်မြစ်ကို ပထမဆုံး တံတားထိုးခဲ့သူ” ခေတ်မီနည်းပညာ မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့် (၁၄) ရာစု တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီး လက်ထက်ကပင် မော်လမြိုင်နှင့် မုတ္တမကြား အပြောကျယ်လှသော သံလွင်မြစ်ကို ပထမဆုံး တံတားထိုးနိုင်ခဲ့သူ မွန်သူရဲကောင်းတစ်ဦး ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၉၀၉) ခုနှစ်၊ (ခရစ်နှစ် – ၁၅၄၇)
တနျဖိုးရှိလှနျးလို့သိမျးထားခဲ့တာပါ။အခုခတျေမှာ လုပျဖို့မပွောနဲ့သိသူတောငျနညျးသှားပွီ။) ဆရာကွီးဒဂုနျ ရဲ့စာတှဖေတျရငျး တှမေိ့လို့သိမျးထားခဲ့တဲ့ထဲက အိမျဆောကျရငျ လိုအပျခကျြတှကေို သိနိုငျဖို့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။မွငျလဲမွငျဆရာ ပါ။ သူရေးခဲ့တဲ့ စာစုကို ပွနျဖျောပွလိုကျပါတယျ။ နစေရာအိမျဆောကျမယျဆိုရငျ ဝဒေင်ျဂတို့နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ ရုနျးကနျလှုပျရှားနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ စား-ဝတျ-နေ-ရေး ကွောငျ့ပဲမဟုတျလား။ အဲဒီ စား-ဝတျ-နေ-ရေး ဆိုတဲ့ စကားလေး သုံးခှနျးဟာ နှုတျကပွောရာမှာ ဘာမှမဟုတျပမေယျ့ သသေခြောခြာ တှေးကွညျ့လေ
ရုရှား၏ထိပ်တန်းလက်နက်အဆင့်(၁၂) နျူကလီးယားစွမ်း အင်သုံး ပဲ့ထိန်းဒုံးတပ်တိုက်ပွဲဝင်ခရူဇာစစ်ရေယာဉ်ကြီးဖြစ် သော KIROV-CLASS BATTLECRUISER
scholes | 22/11/2020
ရုရှားရေတပ်မှ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအားကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော နျူကလီးယားစွမ်း အင်သုံး ပဲ့ထိန်းဒုံးတပ် Kirov-class battlecruisers ကို အကြီးစားပြင်ဆင်၍ ပြန်လည်အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ် သည်။ Kirov-class battlecruisers ကို ရုရှားရေတပ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ပြီး service life အား ၂၀၃၀ မှ ၂၀၄၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်
ငါသည်စစ်ခွေး ( ကျုပ် ဆရာနဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြတ်ပြီး ရှေ့ကို တဟုန်တိုး ပြေးတက် ခြံစည်းရိုးစပ်ကနေ အမြင့်ဆုံးခုန်ပျံ အကြီးဆုံး မိုင်းပေါ် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပစ်ချ အပြင်းထန်ဆုံး ပေါက်ကွဲသံကြီးဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ နောက်ဆုံး အသံမဲ့ ဟစ်ကြွေးသွားတာက ……)
ငါသည်စစ်ခွေး ( ကျုပ် ဆရာနဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြတ်ပြီး ရှေ့ကို တဟုန်တိုး ပြေးတက် ခြံစည်းရိုးစပ်ကနေ အမြင့်ဆုံးခုန်ပျံ အကြီးဆုံး မိုင်းပေါ် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပစ်ချ အပြင်းထန်ဆုံး ပေါက်ကွဲသံကြီးဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ နောက်ဆုံး အသံမဲ့ ဟစ်ကြွေးသွားတာက ……) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ မွေးကတည်းက စစ်ခွေးအဖြစ် မွေးလာတာတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲဗျ
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်မျိုးစုံရောင်းချနေမှုဖြင့် စီးပွားဖြစ်နေသော ရုရှား ( ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ရုရှားက လက်နက်ရောင်းကြီးပွားနေချိန် ဥာဏ်နည်းတဲ့နိုင်ငံကတော့ စစ်တိုက်ပြီး အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်….)
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်မျိုးစုံရောင်းချနေမှုဖြင့် စီးပွားဖြစ်နေသော ရုရှား ( ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ရုရှားက လက်နက်ရောင်းကြီးပွားနေချိန် ဥာဏ်နည်းတဲ့နိုင်ငံကတော့ စစ်တိုက်ပြီး အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်….) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ ရုရှား၏လေကြောင်းရန် ကာကွယ် ရေး စနစ်တင်ပို့ရောင်းချမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ဘီလီယံခန့်ရှိခဲ့သည်ဟုအစိုးရကော်ပိုရေးရှင်း Rostec ၏လက်အောက်ခံ JSC Rosoboronexport ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူက နိုဝင်ဘာ
မြေအောက်သို့ တဖြေးဖြေး နှစ်မြုပ်နေသော မြို့တော်များ (Sinking Cities) ( မြေအောက်ရေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်သုံးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးတွေ သတိထားရတော့မယ်….) *အောကျတှငျ ယူနီကုတျဖွငျ့ ဖျောပွထားပါသညျ။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပိုမိုပူပြင်းလာ၍ ရေခဲပြင်များအရည်ပျော်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာနေမှုကြောင့် ကမ်းခြေအနီးရှိ မြို့တော်များတဖြေးဖြေး နိမ့်ဝင်နေကြသလို အချို့မြို့တော်များကတော့ မြေအောက်ရေများ (Groundwater)